Sarkaal Melleteri Oo Qarax Xooggan lagula Eegtay Agagaarka Wasaaradda Gaashaandhigga.
Thursday August 29, 2019 - 13:31:39 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka nagasoo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan lala eegtay gaari qooqan ah oo uu la socday sarkaal katirsan maleeshiyaadka DF iyadoona faahfaahino dheeraad ah laga helayo qaraxaas iyo khasaaraha uu geystay.
Qaraxan oo ahaa miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa lala helay gaari Qooqan ah waxaana ku dhaawacmay sarkaalkii gaariga saarnaa halka sidoo kalena ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen dhowr askari oo ka mid ahaa ilaaladii gaariga saarneyd.
Gaariga la qarxiyey ayaa la sheegay in ay soo gaartay waxyeelo xooggan iyadoo goor dambe ay goobta soo gaareen maleeshiyaat kale oo gurmad ah.
Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyada qaraxan waxayna carabaawday inuu qeyb ka ahaa howlgallada qorsheysan ee ay ku beegsanayaan cadowga ku sugan magaalada Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ayaa todobaadkan martigelisay qaraxyo xooggan oo lagu ugaarsanayo saraakiisha iyo maleeshiyaatka DFS ee ku sugan magaalada, waxaana midkii ugu dambeeyay uu ahaa qarax xooggan oo lagu dilay xog hayihii hore ee gudoomiyaha gobolka Banaadir Amiin Sheekh Cilmi kaas oo maalma ka hor lagu khaarijiyay qarax ka dhacay meel u dhow isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho.
Sarkaal katirsan Ciidanka Booliska oo Muqdisho lagu dilay iyo warar kale.
Qarax Lix Askari ay ku dhinteen oo ka dhacay duleedka Mandheera.